बतासको रिटमा उच्च अदालतले के दियो अन्तरिम आदेश ? — Sanchar Kendra
बतासको रिटमा उच्च अदालतले के दियो अन्तरिम आदेश ?
काठमाडौँ । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्‍याउन आदेश माग गर्दै होटल आनन्द प्रालिले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। तर आज न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नपर्ने आदेश गरेको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए।
‘यसमा निवेदक स्वयंको निवेदन व्यहोराबाट निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु निवेदक र विपक्षी नं. १ बीच मिति २०७६।१।३० मा सम्पन्न करार सम्झौता बमोजिमको करारीय रहेको, निवेदक र विपक्षीबीच सम्पन्न सम्झौता बमोजिमको कार्य भए/नभएको सम्बन्धमा सम्झौता बमोजिम नै जाँचबुझका लागि छानबिन समिति गठन भएको’, आदेशमा भनिएको छ, ‘र उक्त समितिको पत्राचार बमोजिम निवेदकले जानकारी समेत उपलब्ध गराएको एवं तत्काल करार सझौता बमोजिमको कार्य गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको अवस्था विपक्षीबाट सृजना भएको भन्ने स्थिति निवेदन लेखबाट नदेखिएको समेतको सन्दर्भ समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।